Bahamas Ministry of Tourism & Aviation Chirevo pane Yakavandudzwa Ekuyedza Maprotocol
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Bahamas Kuputsa Nhau » Bahamas Ministry of Tourism & Aviation Chirevo pane Yakavandudzwa Ekuyedza Maprotocol
avhiyesheni • Bahamas Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Kurwisa • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • chengetedzo • Tourism Kutaura • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Sechikamu cheBahamas 'ichienderera mberi nekuedza kupa yakachengeteka uye ine hutano chitsuwa chiitiko kune wese munhu kuti afarire, zvido zvitsva zvekuyedza zvaziviswa kune vanhu vanonyorera Bahamas Travel Health Visa kuti vapinde muBahamas kana vafambe pakati-chitsuwa mukati meBahamas.
Vese vafambi vakazara-vachena vanodikanwa kuti vawane yakaipa COVID-19 bvunzo yakatorwa kwete anopfuura mazuva mashanu (mashanu) mazuva asati asvika zuva rekusvika kuBahamas.
Iko kumwe kuyedzwa kunoshanda kune epakati-chitsuwa kufamba mukati meBahamas.
Vashanyi pamafambo anotangira mukati nekudzokera kuBahamas vanofanira kuramba vachinyorera Bahamas Travel Health Visa uye vatevedze izvo zvitsva zvekuyedza zvevachakabayiwa uye vasina kurapwa.
Kubudirira Chishanu, Nyamavhuvhu 6, 2021, zvinotevera zvirongwa zvichaitika:
Kupinda maBahamas kubva kune Dzimwe Nyika:
Vafambi vese vakabaiwa jekiseni, pamwe nevana vane makore 2-11, vanozodikanwa kuti vawane kuongororwa kwakaipa kweCOVID-19 (ingave yekukurumidza antigen bvunzo kana PCR bvunzo), isina kutorwa anopfuura mazuva mashanu (mashanu) mazuva zuva rekusvika kuThe Bahamas.
Vafambi vasina kuvharirwa vane makore gumi nemaviri zvichikwira vanofanirwa kuwana yakaipa COVID-12 PCR bvunzo isina kutorwa kupfuura mazuva mashanu zuva risati rasvika.
• Vana vese vari pasi pemakore maviri vakasunungurwa kubva pane chero zviedzo zvekuyedzwa.
Kufamba Inter-Island mukati meBahamas kubva kuzvitsuwa zvinotevera: Nassau & Paradise Island, Grand Bahama, Bimini, Exuma, Abaco neNorth neSouth Eleuthera, kusanganisira Harbor Island:
Vanhu vese vakabaiwa jekiseni, pamwe nevana vane makore 2-11, vanoshuvira kufamba mukati meBahamas vanozodikanwa kuti vawane kuongororwa kwakaipa kweCOVID-19 (ingave yekukurumidza yeantigen bvunzo kana PCR bvunzo), isina kutorwa anopfuura mashanu ( 5) mazuva pamberi pezuva rekufamba.
• Vasina kubayiwa jekiseni vane makore gumi nemaviri zvichikwira vanofanira kuramba vachiwana bvunzo dzakaipa dzeCOBV-12 PCR isina kutorwa kupfuura mazuva mashanu zuva rekufamba risati rasvika.